Madaxa xafiiska medborgarkontoret oo la tuhunsanyahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madaxa xafiiska medborgarkontoret oo la tuhunsanyahay
" Laba casho ka hor ayuu shaqeeynayay"
La daabacay torsdag 7 januari 2016 kl 11.51
Hogaamiyaha medborgarkontoret ee xaafada Spånga-Tensta ayaa lugu tuhmaya in u dhowr jeer inuu falal anshax-xumo ku sameeyay gabadh halkaas ka shaqeeysa. Arrinkan oo ay gabadhani dabeetana booliska ula tagtay, dacwad na ka gudbisay. Xafiiska medborgarkontoret oo baadhitaan arrinkan ku saabsan wada, ayaa hogaamiyahan shaqada ka xannibay.
Baadhitaankan ayaa ku saabsan warbixin la xidhiidha bey´adda shaqada , arbetsmiljörapport, oo na soo gaadhay. Kan ayaan ka akhrinay shaqaale ku dhibaateeysan xafiiskan oo caawimaad ka helay dhakhtarka cilmiga nafsiga ee psykolog loo yaqaano, hasayeeshe cadeeyneyn in u xidhiidh la leeyahay gabadhan, madama u xafiiskani diiday in ay warbixin intaas ka badan dhiibaan.
Hasayeeshe waxaa Raadiyaha Iswiidhan laanta afka soomaaliga ah soo gaadhay dacwadii booliska oo cadeeynaysa in ay gabadhani ashkato faraxumeyn ah ka gudbisay hogaamiyaha medborgarkontoret.
Islamarkaas ayuu hogaamiyahani gudoomiye ka yahay jaaliyada soomaalida ah ee loo yaqaano somaliska riksförbundet. Raadiyaha Iswiidhan ayaa dhowr jeer isku dayday in ay wareeysi la qaataan hogaanka ururka, balse jawaab helin.
Hasayeeshe Moa Fahlander oo halkaas ka shaqeeysa ayaa cadeeysay in gudoomiyaha faraxumeeynta lugu tuhmay labo casho ka hor ka shaqeeynayay jaaliyadda soomaalida ee Iswiidhan, weli na gudoomiye ka yahay.